सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखाना धराशायी हुनु नेपालीको दुर्भाग्य हो । सरकारले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने हो र ? भन्ने आवाज पनि उत्तिकै सुनिन्छ । तर, सरकारले उद्योगहरू सञ्चालन गरेपछि त्यसकै देखासिकी, कार्यअनुभवका आधारमा समयक्रमसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि उद्योगधन्दा स्थापना भएका हुन् भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्नु जरुरी छ ।
गत चैतमा भएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको साधारणसभाबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका शम्भुप्रसाद दाहालले नेपालको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल व्यवसायी कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि सिइओका रूपमा करिब ७ वर्ष हाँकेका छन् । उक्त अवधिसम्म अटोमोबाइल क्षेत्रको अनुभव बटुलेका उनले नाडालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ
खुल्ला सरकार साझेदारी (ओजीपी) सन् २०११ देखि सुरु भएको विश्वव्यापी अभियान हो । विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, मेक्सिको, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देश सहभागी भएर सुरु भएको यो अभियानमा थप ६७ राष्ट्रसमेत जोडिइसकेका छन् ।
एडीएस नचाहिने भए खारेज गरे हुन्छ
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । हाल जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ, तर ६६ प्रतिशत हाराहारी जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको कृषिको समग्र उत्पादन भने घटेको छैन । भर्खरै सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको वार्षिक बजेटमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि धेरै शब्द खर्चिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउने गरी कार्यक्रम केन्द्रीत गरेको छ ।
बजेटले खासै अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेजस्तो लागेन । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई बजेटले केही नयाँ नीति ल्याउँछ र व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा थियो, त्यो पनि देखिएन ।
अहिलेको स्थिर सरकार भएकाले बजेट केही फरक ढंगले आएको हामीले महसुस गरेका छौं । तर, निर्वाचनका समयमा लोकप्रिय नारा दिए पनि यो बजेटले ती नारालाई सार्थक पार्न खासै बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन ।
समग्रमा आगामी वर्षको बजेट सकारात्मक छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले दिएका कतिपय सुझाव पनि समावेश भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मिश्रित आएको छ । बजेटमा केही राम्रा पक्ष पनि छन्, सँगै केही कमजोरी पनि छन् । त्यसैलाई मैले मिश्रित बजेटका रूपमा लिएको छु । यद्यपी अध्ययन गर्न बाँकि छ ।
पहिलो पूर्ण संघीय बजेट : नागरिक आशावादी
इतिहासमा पहिलो पटक आज पूर्ण रूपको संघीय बजेट आउँदैछ । वि.सं. २०७२ असोजमा संविधान आएपछि आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ र २०७४-०७५ का लागि बजेट आए पनि संघीयताको मर्मअनुसारको बजेट भने आएको थिएन । भलै गत आवको बजेटमा संविधानको प्रावधानबमोजिम खासगरी स्थानीय सरकारका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट प्रवाह भएको हो । प्रदेश सरकारको गठन नै ढिलो भएकाले प्रदेशको बास्केटमा बजेट राखिएको थियो ।
बैंक धेरै हुँदैमा अर्थतन्त्रमा तात्विक फरक पर्दैन
तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका तुलसीराम गौतमले पछिल्लो समय कान्छो बैंक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
कम्युनिस्टहरू सपनाका व्यापारी मात्र हुन्
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे समकालीन युवा नेताहरूमा सैद्धान्तिक, वैचारिक क्षमता भएका नेताका रूपमा हेरिन्छन् । मातृ पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघको तत्कालीन अध्यक्ष रहेका घिमिरेले गणतन्त्र भनेबापत राजद्रोहको मुद्दासमेत खेपे ।
समृद्धि चाहिने हो भने नीति तथा कार्यक्रम जस्तो निर्दलीय बजेट नआओस्
दुईतिहाइ बहुमत नजिकको वाम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने घोषणासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक, कार्यान्वयनमा भने आशंका
सरकारले सोमबार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्हरूले महत्वाकांक्षी र पूरा हुन कठिन रहेको टिप्पणी गरे पनि निजी क्षेत्रले भने सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र नभई अनुभवी प्रशासक तथा यस क्षेत्रका जानकारहरूले समेत कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
वनस्पतिको अध्ययन–अनुसन्धानमा सरकारी लगानी नै न्यून
नेपाल जैविक विविधताको धनी मुलुक हो । विश्वमा लोपोन्मुख र दुर्लभ अवस्थामा रहेका वनस्पतिहरू नेपालमा पाइन्छ । नेपालमा पाइने वनस्पति तथा जडीबुटीहरू प्रायःजसो औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।